Dagaalo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa duhurnimadii maanta ka dhacay xaafada Via Afmadow oo ka tirsan magaalada Kismaayo ee gobolka J/hoose. | Salaan Media
Dagaalo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa duhurnimadii maanta ka dhacay xaafada Via Afmadow oo ka tirsan magaalada Kismaayo ee gobolka J/hoose.
Wararku waxay sheegayaan in dagaalkaas oo socday muddo saacad ah uu dhexmaray ciidamada Jabhada Raaskambooni ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe iyo maleeshiyo beeleed taageersan siyaasiga Iftiin Xasan Baasto oo ka ka mid ah madaxweynayaasha maamulka Jubaland sheeganaya.
Goob joogayaal ayaa sheegaya in in dagaalka uu saameeyey xaafado ka tirsan magaalada ayna ku dhinteen saddex ruux oo shacab ah oo haweeney caano iibineysay ay ku jirtay, lamana oga khasaaraha kala gaaray labada dhinac.
Iftiin Xasan Xasan Baasto oo ka mid ah madaxweynayaasha sheeganaya maamulka Jubba-land oo la hadlaayey VOA-da ayaa sheegay in weerarkaas isaga lagu soo qaaday, ayna ka dambeeyeen maleeshiyo taageersan Axmed Madoobe oo dooneysay sida uu yiri iney isaga qafaashaan.
“Barqadii mar ay aheyd ayaa anigoo ka imid gurigeyga, joogana albaabka hore ee Hotel Cascaseey si aan booqdo madaxda dowlada ee hotelkaas degan ayaa waxaa weerar igu soo qaaday maleeshiyada Raaskambooni oo doonayey iney i qafaashaan wey i hareereeyeen hase ahaatee rag ilaaladeyda ka tirsan ayaa iga difaacay, dagaalkuna sidaas ayuu ku bilowday” ayuu intaa ku daray Iftiin Xasan Baasto.
Isagoo hadalkiisda sii wata ayaa waxaa uu sheegay siyaasigan inuu ALLE ka badbaadiyey weerarkaas, uuna dib ugu laabtay gurigiisa, wuxuuna ciidamada Kenya ee waafdiga dowlada ku ilaalinaya hotelka Cascaseey ku eedeeyey iney iska daawanayeen markii isaga weerarka lagu soo qaadayey.
“Markii aan gurigeyga ku laabtay ayaa waxaa iga daba yimid saraakiil ka tirsan Raaskambooni oo doonayey iney iga raali geliyaan wixii dhacay, hase ahaatee intii ay ila joogeen ciidamo kale oo raaskambooni ka tirsan oo soo qaatay gaadiid dagaal ayaa guriga igu soo weeraray, waana la iska difaacay” ayuu intaa ku daray Iftiin Xasan Baasto.
Mar la weydiiyey khasaaraha ilaaladiisa ka soo gaartay dagaalkaas iyo cida rasmiga ah ee amaanka magaalada gacanta ku heysa ayuu sheegay in hal askari uu kaga dhaawacmay dagaalkaas, dhinaca ka soo horjeedayna uusan sheegi Karin khasaaraha gaaray, isagoo xusay in amaanka Kismaayo aysan jirin cid gaar ah oo loogu soo hagaago, magaaladana ay tahay mid kala qeybsan.
Waa markii ugu horeysay ee uu dagaal dhexmarao qaar ka mid ah siyaasiyiinta wada sheeganaya iney yihiin madaxweyayaasha Jubbaland ee ku wada sugan magaalada Kismaayo, mana jiro war ku saabsan dagaalkan oo ka soo baxay dhinaca Jabhada Raaskambooni ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe, waxaana hadda degan xaalada magaalada inkastoo ay xiisado ka jiraan.